NY FANGATAHANA HO AN'NY SELFIE MIFIKITRA AMIN'NY ANDROID - ANDROID - 2019
Olana amin'ny lalao
Network sy Internet
Ny fangatahana ho an'ny selfie mifikitra amin'ny Android
Ny tena asan'ny Skype dia ny miantso ny mpampiasa. Afaka ny feo sy ny lahatsary izy ireo. Saingy, misy ny toe-javatra misy rehefa tsy nahomby ilay antso, ary tsy afaka nifandray tamin'ny olona marina ilay mpampiasa. Andeha hojerentsika ny antony mahatonga ity trangan-javatra ity, ary manamboara izay tokony hatao raha toa ka tsy mifandray amin'ny mpanjifa ny Skype.
Toetry ny maso
Raha tsy afaka mahatratra olona iray manokana ianao, jereo ny sata aloha alohan'ny hanaovana zavatra hafa. Azonao atao ny mamantatra ny toeran'ny icon, izay hita ao amin'ny zoro ambany ambany amin'ny avatar mpampiasa ao amin'ny lisitry ny fifandraisana. Raha asehonao ny cursor amin'ity ikaonina ity, dia afaka mamaky ny dikany ianao, na dia tsy mahafantatra ny dikany aza.
Raha manana "Offline" ny mpandray anjara, dia midika izany fa na ny Skype aza dia nesorina, na efa nametraka izany ho an'ny tenany izy. Na ahoana na ahoana, tsy afaka miantso azy ianao mandra-panovan'ny mpampiasa azy.
Azonao atao ihany koa ny maneho ny "Offline" status ho an'ireo mpampiasa manana lisitra anaty lisitra anao. Amin'ity tranga ity, tsy afaka miditra amin'ny finday koa izany, ary tsy misy na inona na inona azo atao momba izany.
Saingy, raha manana toetra hafa ny mpampiasa, tsy zava-misy koa fa ho afaka hivezivezy ianao, satria mety ho lavitra ny solosaina izy na tsy haka ny findainy. Indrindra indrindra, ny mety ho vokatr'izany dia azo atao amin'ny toeran'ny "Out of place" sy "Aza manelingelina." Ny tebiteby avo indrindra azonao, ary ny mpampiasa dia mamoaka ny findainy, miaraka amin'ny sata "Online".
Olana amin'ny fifandraisana
Azonao atao ihany koa ny manana olana amin'ny fifandraisana. Amin'ity tranga ity dia tsy afaka miditra amin'ny mpampiasa iray manokana ianao, fa amin'ny ambiny rehetra ihany koa. Ny fomba tsotra indrindra hahitana raha tena olana amin'ny fifandraisana dia ny fanokafana tsotra izao ny navigateur ary miezaka ny mandeha any amin'ny tranonkala.
Raha tsy vitanao izany, dia tadiavo ilay olana tsy ao amin'ny Skype, satria misy zavatra hafa. Mety ho fialana amin'ny Internet izany, noho ny tsy fandoavan-ketra, ny tsy fahombiazan'ny serivisy, ny famoahana ny fitaovanao, ny fametrahana ny fifandraisana tsy mety amin'ny rafitra miasa, sns. Ny tsirairay amin'ireo olana voalaza etsy ambony ireo dia manana vahaolana manokana, izay mila manokana lohahevitra samihafa, saingy raha ny marina, ireo olana ireo dia manana fifandraisana lavitra amin'ny Skype.
Jereo koa ny haingam-pifandraisana. Ny zava-misy dia amin'ny alàlan'ny haingam-pifamoivoizana ambany indrindra, ny Skype dia manakatona ny antso fotsiny. Ny faharetan'ny fifandraisana dia azo jerena amin'ny loharano manokana. Maro ny tolotra toy izany ary mora ny mahita izany. Ilaina ny mametraka ny fangatahana mifanaraka amin'izany.
Raha ny trangan'ny haingam-pandeha amin'ny Internet dia fisehoan-javatra iray monja, dia mila miandry ianao mandra-piverina indray ny fifandraisana. Raha haingam-pandeha noho ny fepetran'ny tolotr'asa ataonao izany, mba hahafahanao mifandray amin'ny Skype sy manao antso, dia tsy maintsy miditra amin'ny planina maimaim-poana ianao, na manova tanteraka ny mpanolotra na mifandray amin'ny Internet.
Ny olana amin'ny Skype
Saingy, raha hitanao fa tsara daholo ny zava-drehetra amin'ny aterineto, saingy tsy afaka ny hahatratra ny iray amin'ny mpampiasa amin'ny sata "Online" ianao, amin'izay, mety hisy ny tsy fahombiazan'ny Skype. Raha te hanamarina izany ianao dia mifandraisa amin'ny "Echo" teknika amin'ny alàlan'ny fanindriana ny "Call" ao amin'ny menu context. Ny fifandraisana dia napetraka ao amin'ny Skype raha alahatra. Raha tsy misy fifandraisana, raha eo anatrehan'ny Internet speed, mety midika izany fa ny olana dia ao amin'ny programa Skype.
Raha toa ka manana version ny endriny ianao dia ampifandraiso amin'ny farany izany. Na izany aza, na dia mampiasa ny andiany farany aza ianao, dia mety hanampy indray ny famerenana ny programa.
Ankoatra izany, afaka manampy amin'ny famahana ny olana amin'ny tsy fahafahana miantso na aiza na aiza, famerenana fialana. Voalohany indrindra, nosakanantsika ny Skype.
Manoratra ny Win + R mifangaro amin'ny klavier. Ao amin'ny fikandrana Run izay miseho, alefaso ny baiko% appdata%.
Mandehana any amin'ny laha-tahiry, manova ny anaran'ny ordinatera Skype amin'ny hafa.
Manomboka Skype isika. Raha voavaha ilay olana dia alefaso ny tahiry main.db ao amin'ny lahatahiry omena napetraka ao amin'ny lahatahiry vaovao noforonina. Raha mitoetra ny olana dia midika izany fa tsy ao anatin'ny sehatra Skype ny antony. Amin'ity tranga ity, esory ny lahatahiry vaovao noforonina, ary avereno any amin'ny ordinatera taloha ny anarana taloha.
Ny iray amin'ireo antony tsy ahafahanao miantso olona dia virosy virosin'ny ordinateranao. Raha sendra loza izany, dia tsy maintsy alaina amin'ny fampiasana antivirus iray izy io.
Antivirus sy firewall
Mandritra izany fotoana izany, ny programa manohitra ny viriosy na firewall ny tenany dia mety hanakana ny sasany amin'ny Skype, anisan'izany ny fanaovana antso. Amin'ity tranga ity, andramo ny fanesorana tsy ho ela ireo fitaovana fiarovana an-tserasera ary tsindrio ny antso Skype.
Raha azonao atao ny miditra, dia midika izany fa ny olana dia ny fametrahana ny utility-ny Antivirus. Andramo ny fampidirana Skype ho an-tsokosoko. Raha toa ka tsy voavaha amin'ity olana ity ny olana, mba hahafahana manao antso an-telefaona amin'ny Skype, dia tsy maintsy manova ny fampiharana ny virus amin'ny programa hafa mitovy amin'izany ianao.
Araka ny hitanao, ny tsy fahafahana miantso mpampiasa Skype hafa dia mety ho vokatry ny antony maro. Andramo aloha ny hametra ny lafiny iray amin'ny olana: mpampiasa iray hafa, mpamatsy, rafitra opera, na Skype. Aorian'ny fametrahana ny loharanon'ny olana, andramo ny hamaha izany amin'ny iray amin'ireo fomba mety hanesorana ireo fomba fiasa voalaza etsy ambony.
Ahoana no fomba hananganana fifandraisana Internet amin'ny Windows
Famolavolana Font amin'ny Photoshop
Ahoana no hanaisotra ny Windows 10 Firewall
File Recovery Software: Seagate File Recovery
Firmin'ny fiara sy fitaovana hafa
Prints sy scanners
"Folo", toy ny OS rehetra hafa avy amin'io fianakaviana io, dia mandeha amin'ny fahadisoana. Ny tena mahasosotra indrindra dia ireo izay manakana ny fandehan'ny rafitra na manakana azy io amin'ny fahaizana miasa. Androany dia hijery ny anankiray amin'izy ireo isika miaraka amin'ny "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" code, izay mitondra mankany amin'ny mombamomba ny maso manga. Fahotana "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" Ity faharesen-dahatra ity dia milaza amintsika fa misy olana amin'ny boot diskette ary misy antony marobe. Read More
Mivadika HTML amin'ny format Excel Microsoft Excel
Nosamborin'ny manampahefana frantsay Valve sy Ubisoft
WindowsValin'ny fanontanianaOlana amin'ny lalaoNetwork sy InternetVaovaoArticlesLahatsary sy feoTenyExcelWindows OptimizationFor beginnersLaptopFamerenana sy famerenana amin'ny laoninyFiarovana (viriosy)Fitaovana findayOfficeNavigateurIreo programaComputer cleaningIOS sy MacOSFikarohana vyKapilaReniranoSkypeBluetoothArchiversFinday avo lentaFahadisoanaFeoMpamily
https://termotools.com mg.termotools.com © Android 2019